Arsene Wenger Oo Kula Biiray Zinedine Zidane Liiska Xubnaha Laga Doonayo Paris Saint-Germain
HomeWararka CiyaarahaArsene Wenger oo kula biiray Zinedine Zidane Liiska Xubnaha laga doonayo Paris Saint-Germain
February 4, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka France, Suuqa kala iibsiga 0
Zinedine Zidane ayaa loo maleynayaa inuu aad ugu baahan yahay inuu la shaqeeyo tababarihii hore ee Arsenal Arsene Wenger hadii uu doonayo inuu Mauricio Pochettino ka bedelo Paris Saint-Germain .
Pochettino ayaa durba lagu xamanayaa inuu doonayo inuu ka tago PSG iyadoo la soo jeedinayo inuusan ku faraxsanayn kooxda, iyadoo Manchester United ay u aqoonsan tahay inuu yahay musharaxa ugu cadcad inuu qabto xilli ciyaareedka soo socda.
Haddii Pochettino uu ka tago Parc des Princes sanadkan, Zidane ayaa loo maleynayaa inuu yahay dooqa koowaad ee PSG si uu u bedelo, Les Parisiens ayaa lagu soo waramayaa inay aragtay tababarihii hore ee Real Madrid inuu iska diiday fursad uu ugu biiri lahaa Janaayo.
Zidane ayaa loo malaynayay inuu diiday fursadaas sababtoo ah wuxuu ku qanacsanayn qaabka kooxda loo maamulo, sidoo kale wuxuu la dhacsan yahay agaasimaha ciyaaraha ee Leonardo .
Si kastaba ha ahaatee, sida laga soo xigtay Foot Mercato , iyada oo loo marayo GFFN , PSG ayaa diyaar u ah inay sameyso wax kasta si ay ugu qanciso Zidane inuu beddelo Pochettino, waxaana ay diyaar u tahay inay u ogolaato tababaraha Faransiiska inuu go’aansado cidda uu doonayo agaasime ahaan.
Warbixinta ayaa intaa ku dartay in Wenger iyo Zidane ay labaduba doonayaan inay wada shaqeeyaan, sidaas darteed iskaashiga PSG ee xilli ciyaareedka 2022-23 ayaa u muuqda ‘mid sii kordheysa’.
Wenger oo hadda 72 jir ah ayaa ka tagay Arsenal kaddib 22 sano oo uu maamulayay xagaagii 2018, waxaana uu hadda u shaqeeyaa madaxa FIFA ee horumarinta kubbadda cagta adduunka.